Wikipedia:Ogaysiiska Maamulka - Wikipedia
Boggaan wuxuu gaar u yahay bedeleda in uu wax ka qabto Maamulka. ogaysiinta maamulada dhowr qaybood ayuu u qabsanyahay. Waxaana loola jeedaa ilaalinta bogaga lagu ciyaaray, iyo codsiyada kasaarista waardiyeenta marka loo baahdo in wax laga qabto. qaybta kajoojinta codsiyada gudagalayaasha (Kuwa qoran ama aan diiwaanka ku jirin) bedelka taasoo ah macnaheeda in uu ku ciyaarayo, marmar sidoo kale waa laga saaraa ilaalinta marka loo baahdo (Sidoo kale eeg Awood gaara). Qaybta dib usoo celinta si loo codsado soo celinta bogga marka la tirtiro kadib haddii aanuu jirin sabab diidaysa.
Codsiga waardiyaha qaar kamid ah bogagga ama kasaari waardiyaha. aqri Xeerka waardiyaha
Codsiga waardiyaha Codsiga Kasaarista Waardiyaha
2.1.1 Waardiye: Bogga Hore (Maxa ku jira · Taariikh · Log · Waardiye)
2.1.2 Waardiye: Soomaaliya (Maxa ku jira · Taariikh · Log · Waardiye)
2.2 Kasaarista waardiyaha
2.2.1 Kasaaris Waardiye: Bogga Hore (Maxa ku jira · Taariikh · Log · Waardiye)
3 Tallo Bixin
4 Warsan iyo Gudoon
Waardiye: Bogga Hore (Maxa ku jira · Taariikh · Log · Waardiye)Edit
Waardiye: Soomaaliya (Maxa ku jira · Taariikh · Log · Waardiye)Edit
Waa iska tijaabo--Abshirdheere (talk) 18:51, 21 Abriil 2014 (UTC)
Kasaaris Waardiye: Bogga Hore (Maxa ku jira · Taariikh · Log · Waardiye)Edit
Kani waa bogga wadahadalka ee ka doodista hagaajinta Ogaysiiska Maamulka.
ku qor qoraalkaada qoraalka hore hoostiisa. ama Halkaan guji si aad u biloowdo qormo cusub.
Fadlan saxiix qoraalkaada adigoo sidaan qoraya (~~~~).
Ma ku cusubtahay wikipedia Caawinaad! Susaal, waydii jawaab waad heli.
Anshax lahaaw, hana dhibin kuwa cusub
Niyad wanaagsan la imoow
qofna shaqsiyaddiisa ha weerarin
Wixii muran ah, isku day inaad xaliso
Asc walaal, salaan qaali ah ka dib waxaan rajaynayaa inaad fiican tahay. Soomaalidu waxay horey u tidhi "Gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan!" taasi oo macnaheedu yahay inaan dhamaanteen hadii aan iskaashano horumar gaadhayno. Ma rabo inaan hadal dheer iyo gubaabo halkan ku qoro; murtida hadalkeygu waa aan wada tashano oo markiiba hal talaabo wada qaadno dhamaanteen. Waad aragtey afar qof ayaan meeshan ku soo galnaa, mid kastana wax ayuu si gaar ah u qoraa; markaa aan bal hal jiho u wada jeesano, oo hal "ciwaan" culeyska saarno. Aan iscaawino oo wax isbarno ama kala faa'iideysano.
Mudane Abshirdheere, Kali duul iyo Dalsoor waxaan si sharaf leh idiinka codsanayaa inaan afarteenani isku jiho noqono oo wada tashano ee maxay idinla tahay?
Su'aal: ciwaankee ayaad jeceshahay inaan balaadhino bishan? Sida: Soomaaliya, Turkiga, Afrika, Islaamka iwm. Mahadsanid, Ismail4all (talk) 07:09, 4 Oktoobar 2016 (UTC)
Abshirdheere, Kali_duul, Dalsoore waan idin salaamay. Waxaan codsanayaa inaad iga caawisaan balaadhinta mashruucyadan:
Template:Wasaaradaha Soomaaliya iyo
Dad Soomaali ah ayaan nahay, aan mudnaanta siino Maqaalada ku saabsan Soomaaliya iyo Dadka Soomaalida.
Mahadsanid, Ismail4all (talk)
Warsan iyo GudoonEdit
Inkastoo aan baryahaan yara mashquulay hadana hada waan soo noqday, Ismail4all waa talo wax ku ool taladaadu, ee xageen ku wada hadalnaa goormaanse ballanaa, anigu diyaar baan ahaye. --Kali duul (talk) 08:29, 13 Oktoobar 2016 (UTC)
Mudane Kali duul, waan ku faraxsanahay inaan isku aragti nahay. Wax badan ayaa qabyo ah, markaa waxaan ku bilaabaynaa inaan balaadhino qoraalada ku saabsan Soomaaliya. Maqaaladan waxay ka mid yihiin bogaga u baahan samaynta iyo balaadhinta:
Template:Xiriirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya
Liiska magaalooyinka Soomaaliya (maqaalo badan ayaa qabyo ah)
Fikrad, tallo iyo su'aal intaba waan soo dhowaynayaa. Fadlan fariimahaaga iigu reeb Bogayga Wadahadalka. Mahadsanid, Ismail4all (talk) 02:53, 15 Oktoobar 2016 (UTC)
Thank you! CKoerner (WMF) (talk) 18:40, 25 Luuliyo 2017 (UTC)
I need help reviewing a Global RFCEdit
MassMessage sent by Micru on 18:00, 7 Juun 2018 (UTC)
CKoerner (WMF) (talk) 21:21, 6 Diseembar 2018 (UTC)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Ogaysiiska_Maamulka&oldid=186968"
Last edited on 6 Diseembar 2018, at 21:21
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Diseembar 2018, marka ee eheed 21:21.